Dadka ku dhintay rabshadaha Itoobiya oo kordhay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Dadka ku dhintay rabshadaha Itoobiya oo kordhay
Booliska dalka Itoobiya ayaa sheegay dadka ku dhintay mudaharaadyada rabshadaha watay ee dalka Itoobiya ka dhacay ay ku dhinteen 166 qof.
Taliye ku xigeenka booliska deegaanka Oromada Girmaa Galaan wuxuu FBC u sheegay mudaharaadyadi rabshadaha watay ee dalka Itoobiya ka dhacay dadka ku dhintay inay isugu jiraan 145 qof oo shacab ah iyo 11 askari oo ka mid ah ciidamada ammaanka.
Mr Girma wuxuu intaasi ku daray iney rabashadahaasi 167 qof oo kale waxyeello ka soo gaartay, dowladduna ay xidhay dad ay tiradooda gaareyso 1,084 oo rabshadaha iyo qulqulatooyinka dalka Itoobiya ka dhacay.
Taliyaha waxa kale uu sheegay dhimashada dadkaasi iney keentay rasaas ay ciidamada amaanka mudaharaadayaasha ku fureen iyo isku dhacyo dhex maray qowmiyado iska soo horjeeda.
Komishneerka booliska magaalada Addis Ababa Getu Argaw oo dhawaan warbaahinta dalka Itoobiya la hadlay wuxuu sheegay dadka dhintay iney naftooda ku waayeen qarax bambooyin, rasaas iyo dhagaxaan ay mudaharaadayaashu isladhaceen.
Previous articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 06-07-2020
Next articleKoonfur Afrika: Weerarada ka dhanka ah Soomaalida oo kordhay